साओमीकाे नयाँ फाइभजी स्मार्टफोन बजारमा
Sat, Jul 11, 2020 at 7:19pm
प्रचण्डद्वारा नारायणी नदीले कटान गरेको क्षेत्रको निरीक्षण #आहा खबर# नेपालमा थप ७० जनामा देखियो कोरोना सङ्क्रमणः कहाँ कति सङ्क्रमित ? #आहा खबर# कोरोना सङ्क्रमणबाट थप तीनको मृत्यु, मृतकको सङ्ख्या ३८ पुग्यो #आहा खबर# पशुपतिको जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ, सरकार बेखबर #आहा खबर# ओलीसँग युद्धविराम गरेर गृहजिल्ला चितवन जाने तयारीमा प्रचण्ड #आहा खबर# खैरो हिरोइनसहित कैलालीमा २ जना पक्राउ #आहा खबर# गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितकाे संख्या १२ सय नजिक #आहा खबर# बालुवाटारमा विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक जारी, देउवा पनि सहभागी #आहा खबर# अबदेखि सातै प्रदेशमा ५ हजार ५ सय तिरेर कोरोना परीक्षण गर्न पाइने #आहा खबर# सुदूरपश्चिममा काेराेना संक्रमितको संख्या ३ हजार ७ सय ५५ पुग्यो #आहा खबर# कोरोना संक्रमणबाट केएमसी अस्पतालमा एक जनाकाे मृत्यु #आहा खबर# अमेरिकामा एकैदिन थपिए ७१ हजार कोरोना संक्रमित #आहा खबर# पशुपतिको जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ #आहा खबर# पहिरोमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई १ लाख र घाइतेलाई निःशुल्क उपचार #आहा खबर# बढ्यो अमेरिकी डलर, युएइ दिराम र मलेसियन रिँगिटको भाउ #आहा खबर#
शुक्रबार, २ फागुन २०७६,	आहाखबर
पेचिङ, २ फागुन । साओमीकाे नयाँ फाइभजी स्मार्टफोन सार्वजनीक भएकाे छ ।चिनियाँ स्मर्टफोन निर्माता कम्पनी साओमीले नयाँ फाइभजी स्मार्टफोन लञ्च गरेको हाे ।
कम्पनीले बिहीवार पाँचौं पुस्ता 'फाइभजी'को दूरसञ्चार नेटवर्कमा चल्ने फल्यागशीप स्मार्टफोनहरु लञ्च गरेको हो । घरेलु बजारमा विक्री घट्दै गइरहेको बेलामा सीमापारका बजारमा विक्री बढाउन कम्पनीले ती फोन ल्याएको हो ।
कम्पनीले पेचिङस्थित मुख्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमआई टेन, एमआई टेन प्रो सार्वजनिक गरेको छ । यी दुबै उपकरण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विक्रीका लागि पठाउनु अघि कम्पनीले चिनियाँ बजारमा उपलब्ध गराउनेछ ।
यी दुबै उपकरणमा ६.६७ इञ्चको फूल एचडी डिस्प्ले रहेको छ । क्वालकमको स्न्यापड्र्यागन ८६५ प्रोसेसर जडित यी फोनमा चार ओटा क्यामरा राखिएको छ ।
यी मध्ये एउटा क्यामरामा भने सामसङले विकास गरेको १०८ मेगापिक्सलको सेन्सर राखिएको छ । चीनको बजारमा एमआई टेन फेबु्रअरी १४ देखि नै विक्रीका लागि उपलब्ध हुनेछ ।
यसको शुरुआती मूल्य ३ हजार ९९९ युआन रहेको छ । एमआई टेन प्रो भने फेबु्रअरी १८ देखि मात्रै विक्रीका लागि उपलब्ध हुने र यसको शुरुआती मूल्य ४ हजार ९९९ युआन रहेको बताइएको छ । पछिल्लो समय चिनियाँ उपभोक्ताहरुमा फाइभ जीको चाहना बढेको छ । यसको लाभ नयाँ फोनलाई हुने आशा साओमीको छ ।
यी उपकरणले घरेलु बजारमा कम्पनीको विक्री बढाउन मद्दत मिल्नेमा कम्पनी आशावादी छ । साओमीले यसै वर्ष चीनमा फाइभजी चल्ने १० ओटा मोडल ल्याउने योजना बनाइरहेको छ । चीनमा कम्पनीको विक्री घटिरहेको भएपनि विश्व बजारमा भने राम्रै छ ।
घरेलु बजारमा विक्री सुस्ताउन थालेपछि कम्पनीले भारतलगायत बजारमा ध्यान दिइरहेको छ । गत वर्ष विश्व बजारमा कम्पनीको स्मार्टफोन विक्री साढे ५ प्रतिशतले बढेको बजार अनुसन्धाता संस्था आईडीसीले बताएको छ ।
नोकियाले ल्यायो पहिलो पटक ५ जी फोन, कति पर्छ मूल्य ?
फ्रान्सले एप्पललाई १ अर्ब २३ करोड डलर जरिवाना तिराउँदै
काेराेना प्रभाव : चीनबाहेक अन्य मुलुकमा एप्पल स्टोरहरु बन्द
ओपो एफ १५ स्मार्टफोन अब नेपाली बजारमा
सोनीले ५ वटा क्यामेरासहितकाे सोनी ५ प्लस सार्वजनिक गर्दै
एप्पलको सबैभन्दा सस्तो आइफोन सार्वजनिक हुँदै
नेपालमा थप ७० जनामा देखियो कोरोना सङ्क्रमणः कहाँ कति सङ्क्रमित ?